I-Xiaomi Mi 9: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Emva kweeveki zokuphuphuma, iXiaomi Mi 9 ibekwe ngokusesikweni. Isiphelo esitsha esitsha sophawu lwesiTshayina sivezwe kumsitho kwilizwe labo. Phambi kwengxelo yayo yamazwe aphesheya leyo izakuqhubeka ngale Cawa kwi-MWC 2019. Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo a ntetho e China ngoFebruwari 20, into eyenzekileyo ekugqibeleni. Ke siyayazi yonke into malunga nesi siphelo siphezulu.
Yintoni esinokuyilindela kule Xiaomi Mi 9? Enkosi ngokuvuza kwezi veki Besineenkcukacha ezininzi malunga nale fowuni. Ukusuka kwikhamera yangemva kathathu, ukuya kwi isivamvo somnwe esenziwe kwiscreen kunye nezinye iinkcukacha. Okokugqibela, isiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina sisemthethweni.
Le modeli yohlobo lwesiTshayina luphezulu kuluhlu. Uphawu olutsha lokuba uphawu luyakwazi ukuvelisa iimodeli ezinomdla kolu luhlu luphezulu. Ngokuqinisekileyo i-smartphone eyaziwayo. E-China sele ikho, ngenani elikhulu loovimba ukuza kuthi ga ngoku.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9
2 Xiaomi Mi 9: Isiphelo esipheleleyo esipheleleyo
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 9
Inxalenye yokubalulwa kwale Xiaomi Mi 9 sele ivuza kwezi veki. Nangona ngoku sele bekwazile ukuqinisekisa. Ke sele siyazi into emasiyilindele kwesi siphelo sophawu lwesiTshayina. Umgangatho kunye nokusebenza okukhulu kwinxalenye yakho. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Ukucaciswa kobuchwephesha Xiaomi Mi 9
Ikhamera esemva I-48 + 16 + 12 MP ene-f / 1.8 kunye ne-f / 1.2 PDAF kunye ne-LED Flash
Ubukhulu X x 157.5 74.67 7.61 mm
Le Xiaomi Mi 9 iza nepaneli ye-Samsung Super AMOLED. Ke uphawu lwaseTshayina luzibophelele kumgangatho, nangona oku kunganyusa ixabiso lesixhobo kakhulu. Ikhethe ukukhanya ukuya kuthi ga kwi-600 nits, ukongeza ekukhuseleni iCorning Gorilla Glass 6 kwisixhobo. Uphawu lwesiTshayina luye lwasebenzisa ithuba elingaphambili lefowuni kakhulu, kuba isikrini sayo senza i-90,7% yale ngaphambili. Isikrini esingaphezulu kunye nenotshi enobulumko ngakumbi. Ngapha koko, imiphetho incitshisiwe kakhulu. I-brand ithi umda ongezantsi uncitshiswe nge-40%.
Xiaomi Mi 9: Isiphelo esipheleleyo esipheleleyo
Njengoko ibichaza iinyanga, iXiaomi Mi 9 yi-smartphone yokuqala yohlobo lwe-Snapdragon 855. Ke sinokulindela amandla amakhulu kwisixhobo ngokwendlela yokusebenza. Iyakwenza oko ihamba neenguqulelo ezimbini ze-RAM kunye nokugcinwa, i-6 kunye ne-8 GB ye-RAM ngokuxhomekeke kuguqulelo kunye ne-128 kunye ne-256 GB yokugcina. Iya kuvumela abasebenzisi ukuba bakhethe uhlobo abalufunayo.
Umva kwesixhobo yinto evelisa umdla omkhulu. Ngenxa yokuba le modeli yeyokuqala yophawu lokufika kunye nekhamera engasemva kathathu. Lo nto kulindeleke lukhulu kuyo ngale ndlela. Sidibana ne- Inzwa ye-MP eyi-48, enye ye-16 MP ye-panoramic kunye nekhamera ene-telephoto optics kunye ne-12 MP sensor kwindawo yesithathu. Ke ibekwe njengenye yeefowuni ezinamandla kule ndima kwi-Android.
Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe kwiscreen. UXiaomi uphawule ukuba zininzi izinto ezenziweyo kuyo. Ngapha koko, ngaphambi kwenkcazo, uphawu sele lubhengezile ukuba inzwa yeminwe yale Xiaomi Mi 9 yayiyeyona ikhawulezayo kwintengiso. Bakufezekisile oku ngokuhlala kwindawo enkulu yescreen, evumela ukusebenza okungcono.
Ibhetri yefowuni yi-3.300 mAh, yanele ngokudibanisa neprosesa. Njengoko kulindelwe, ifika nentlawulo ekhawulezayo. Ukongeza, sikwafumana ukutshaja ngaphandle kwamacingo, okokuqala kwi-smartphone yolu luhlu lweshishini laseTshayina. Kwelinye icala, iXiaomi Mi 9 sele ifikile ngePie ye-Android kunye ne-MIUI 10 njengomaleko wokwenza ngokwezifiso.
IXiaomi Mi 9 sele ibonisiwe eTshayina. Ke sinamaxabiso asemthethweni esixhobo eChina. Ngokuqinisekileyo ngeCawe amaxabiso ayo eYurophu aya kutyhilwa kwinkcazo-ntetho yawo kwi-MWC 2019. Kodwa, ngamaxabiso ase-China sinokufumana umbono wokuba silindele ntoni kwisixhobo.
Iinguqulelo ezintathu zesixhobo silindelwe, ubuncinci kwimeko yase China. Amaxabiso nganye yezi nguqulelo ziphezulu zezi:
Inguqulelo ye-6/64 GB inexabiso kwi-2.499 yuan (I-326 euro ukuyitshintsha)
Imodeli ye-8/128 GB iya kubiza i-2.899 yuan, emalunga nayo 379 euro Utshintsho
IXiaomi Mi 9 ene-8/256 GB iya kubiza i-3.499 yuan (malunga 457 euro Kutshintsho)
Nangona eyona iqhelekileyo yile Amaxabiso ezixhobo aya kuba phezulu xa kusungulwa eYurophu. Kodwa okwangoku asazi ukuba ziya kubiza malini kunexabiso abanalo e-China. Ukongeza, kwintetho yayo kwi-MWC 2019 siyokwazi ukuba iyakuphehlelelwa nini eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi 9 ngoku isemthethweni: Isiphelo esitsha sophawu
Ulonwabo kunye nomlutha wokuzibandakanya neBoost Buddies